१८ बर्ष’का देवरलाई लुकी लुकी काेठा’मै बाे’लाएर पेट’मा बच्चा बस्दा ‘ससुरालाई पेट सु’नियाे भनेपछि…. – PathivaraOnline
Home > अपराध > १८ बर्ष’का देवरलाई लुकी लुकी काेठा’मै बाे’लाएर पेट’मा बच्चा बस्दा ‘ससुरालाई पेट सु’नियाे भनेपछि….
१८ बर्ष’का देवरलाई लुकी लुकी काेठा’मै बाे’लाएर पेट’मा बच्चा बस्दा ‘ससुरालाई पेट सु’नियाे भनेपछि….
admin January 25, 2021 January 25, 2021 अपराध, जीवनशैली	0
एजेन्सी । भाउजु आमा समान हुन्’ भन्ने भनाईलाई कैलालीका एक युवाले मिथ्या सावित गरेका छन्। आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजुलाई गर्भवती बनाएर ती युवाले यस्तो हर्कत देखाएका हुन् । प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्कीमा एक १८ वर्षीय देवरले भाउजुलाई गर्भवती बनाएका हुन्।
दाजु विदेश गएको मौका पारी भाउजुसँग सल्किएका ती देबरले एक छोरीकी आमालाई गर्भवती बनाएका हुन्। श्रीमान विदेश गएको एक वर्ष पछि ती महिला गर्भवती भएकी थिइन्। गर्भवती भएकी ती महिलाले लाजै पचाएर ससुरालाई पेट सुनियो भनी झुट्टो बोलेर उपचारको बाहनामा अस्पताल गएपछि गर्भवती भएको रहस्य खुलेको हो। उनका श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा मलेशीया छन्। **पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
खुशीको खबर: एक पटक खाए महिनाभर पुग्ने ग’र्भनि’रो’धक चक्की !
अध्ययन भन्छ, यी कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिन्छन् महिलाहरू !
दुई दिनदेखि हराइरहेकि २५ बर्षिया रोशनी पोखरीमा तैरिरहेको अवस्थामा फेला परिन !
राति सुत्ने बेला भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, जिन्दगी नै धरापमा पर्नसक्छ !
आज पुत्रदा एकादशी: शिव महादेवको ब्रत बसेर पुजा गरे पुत्र प्राप्ति हुने यस्ताे छ धार्मिक विश्वास!
नायिका श्वेता भट्टराईका श्रीमान् मिलनको कोरोनाका कारण दुखद निधन